Dugsiga Hoose (K-5) | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Arday kasta oo dugsi hoose ah wuxuu helaa waxbarid farshaxan muuqaal ah hal mar lixdii maalmood ee wareegga xirfadiisa aasaasiga ah. Waqtiga istuudiyaha waxaa ka mid ah xalinta dhibaatada ku saleysan su'aalaha iyo fekerka muhiimka ah, iyo sidoo kale isticmaalka aaladaha kala duwan iyo tikniyoolajiyadda. Ciyaarta hal abuurka ah & waqtiga sahamintu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waayo-aragnimada farshaxanka.
Qeybaha aasaasiga ah ee barnaamijka farshaxanka muuqaalka aasaasiga ah waxaa ka mid ah:
Abuuritaanka - sameynta farshaxanka
Kajawaabida - kahadalka fanka
Isku xirnaanta - sida farshaxanku u saameeyo una saameeyo adduunka inagu xeeran
Soo bandhigida - la shaqeynta dhagaystayaasha
Ardaydu waxay casharo muusig ah ka helaan macalin muusig oo ruqsad haysta laba maalmood lixdii maalmood ee wareega ah. Casharradu waxay diiradda saarayaan soosaarida muusikiiste sifiican uxirfad leh oo wax aqrin kara oo ay kamid yihiin heesaha, muusikada aaladda, tababarka maqalka, halabuurka / hagaajinta, suugaanta qaafiyadda, iyo akhriska qoraalka. Casharada bilaashka ah ee qalabka muusigga waxaa bixiya macallimiinta muusikada qalabka muusikada leh ee ka bilaabanaya fasalka afaraad.
Laga bilaabo fasalka shanaad, ardaydu waxay doortaan inay xooga saaraan koritaankooda muusikada aag gaar ah: muusikada codka (heesaha), qalabka xadhigga (orchestra), qalabka dabaysha / garaacista (kooxda), ama muusikada guud. Waxay kuxirantahay doorashadooda, ardaydu waxay helayaan casharo muusig koox-kooxeed leh macalin guud oo ruqsad haysta ama macalin muusig ah oo heysata shati labo maalmood lixdii-maalin wareega. Intaa waxaa dheer, ardayda muusikada muusikada waxay sidoo kale helaan hal cashar koox-yar ah oo ku saabsan aaladda ay doortaan lixdii maalmood ee wareega ah.